Dowladda oo ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socdo Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Dowladda oo ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socdo Gaalkacyo
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo jooji dagaalada ka soo cusboonaaday Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xuntahay dirirta u dhexeysa dadka walaalaha ah ee wada daga deegaannada gobolka Mudug, waxa uuna ugu baaqay in si dhaqso ah loo joojiyo colaadahaas, maadaama ay dhalinayaan dhiilo colaadeed oo intaan ka badan.
“Dowladda Soomaaliya waxa ay ka xuntahay kana digeysaa in colaad laga dhex huriyo dadka walaalaha ah ee wada daga gudaha magaalada Gaalkacyo. Sidoo kale dowladdu waxa ay madaxweynayaasha maamullada Galmudug iyo Puntland, wasiirada salaadiinta iyo waxgaradka ugu baaqeysaa in ka shaqeeyaan joojinta colaadaha sii huraya ee ka jirta gobolka Mudug, si dib loogu soo celiyo wadanoolaanshihii iyo isusocdka bulshada” ayuu yiri, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye”.
Wasiirka ayaa ugu danbeyntii tilmaamay in dowladda ay waqti badan galin doonto sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalada ku soo noq noqday deegaanada gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Liiska ergadii dooran lahayd 128 xildhibaan oo loo soo gudbiyey guddiga doorashooyinka dadban.
Xildhibaano Ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyo oo ka qayb galay Xuska aasaaskii baarlamaanka Masar “SAWIRRO”
Xildhibaano Ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyo oo ka qayb galay Xuska aasaaskii baarlamaanka Masar "SAWIRRO"